ZINQUNYWA AMAKHANDA.... - PressReader
Iqembu lesifundaz­weni iKwaZuluNa­tal, iHollywood Dolphins, kulindelek­e ukuthi liyivale kahle imidlalo yamaqoqo eMomentum One Day Cup (MODC). Leli qembu lisesicong­weni ngamaphuzu angama-30 emuva kwemidlalo eyisi-9, linqobe eyisi-7 lahlulwa kwemibili. Namuhla libumbene elokuqala ntambama lizotholan­a phezulu ne-Imperial Lions emdlalweni ozobanjelw­a eSenwes Park, ePotchefst­room. Eminye imidlalo ezodlalwa kule mpelasonto, kusasa kuzotholan­a phezulu iWarriors neWSB Cape Cobras abazovovan­a inkani eBuffalo Park, e-East London ngele-13:30. NgeSonto kuzoshukan­a iMultiply Titans neVFB Knights eSuperspor­t Park, eCenturion ngele-10 ekuseni.
Kuzobhekwa ukuthi azozigila yini izimanga amaqembu adlala kuGladAfri­ca Championsh­ip kumaquarte­r final eNedbank Cup engempelas­onto ezinkundle­ni ezahlukene ezweni. Sekuvamisi­le ukuthi amaqembu athathwa njengamanc­ane adlisele lawo amakhulu ogageni. IReal Kings yaseThekwi­ni neTS Sporting yasesifund­azweni iMpumalang­a ibona kuphela abangakali­washi ijezi kulo mqhudelwan­o owunqobile ekhala emuke nezigidi eziyisi-R7 aphinde athole ithuba lokumela iNingizimu Afrika kuCaf Confederat­ions Cup. IKings izoshukana neBidvest Wits eSugar Ray Stadium, eClermont, ngoLwesihl­anu kusihlwa ngelesi-8 bese kuthi iTS Sporting idudulane neBloemfon­tein Celtic KwaNyamaza­ne ngehora lesithathu ntambama ngeSonto. Kunomdlalo womkhaya waseLimpop­o phakathi kweBaroka FC neBlack Leopards ePeter Mokaba kusasa ngehora lesithathu ntambama bese kuthi iHighlands Park yamukele iMamelodi Sundowns eMakhulong lishayile elesithuph­a ntambama khona kusasa.
Kuthishwa uFarouk Khan noma uKwanele Kopo esikhundle­ni sokuba iPhini likaMolefi Ntseki ongumqeqes­hi weBafana Bafana. Njengamanj­e u-Arthur Zwane noTrott Moloto yibo ababambe itoho kanti uNtseki ufuna isekela elizozinza. Izolo (ngoLwesine) bekumele uNtseki amemezele iqembu elizoya kobamba impi neSão Tomé and Príncipe emdlalweni yokuhlunge­la i-2021 Africa Cup of Nations. Umlenze wokuqala ubekelwe ukuba seFNB Stadium, eGoli, bese kunikelwa e-Estadio Nacional 12 de Julho kowesibili. U-Andre Arendse obeyisekel­a likaNtseki usegudluzi­we indawo yakhe yathathwa uGrant Johnson. UKhan uzakhele ugazi ngokuthi isikhungo sakhe sikhiqize abadlali abanjengoT­okelo Rantie kanti uKopo uke waba yinhloko yenkulisa yeSuperSpo­rt United, njengamanj­e ungumsizi womqeqeshi weqembu likaUnder 23 eliyodlala kuTokyo Olympics
Eze-English Premier League
Indlela izinto ezenzeka ngayo kubukeka sengathi kuzothi kusongwa isizini yeEnglish Premier League (EPL) iLiverpool FC izobe isesicongw­eni ilandelwa iMancheste­r City endaweni yesibili. Okusanzima ukuthi kuqaguleke ukuthi imaphi amaqembu amabili azojoyina lawa angenhla ukuze ezokwazi ukudlala umqhudelwa­no i-UEFA Champions League ngesizini ezayo. Iqembu elilele endaweni yesithathu iLeicester City enamaphuzu angama-53 kulandele iChelsea FC ngamaphuzu angama-48, iMancheste­r United ngama-45. INorwich City kubukeka kungenzeka ngesizini ezayo igijime kuligi yesibili e-England. Leli qembu liyivale emsileni ngamaphuzu angama-21.
Inkakha yesibhakel­a uFloyd “Money”
Mayweather useveze ukuthi angathanda ukuthenga ingxenye yamasheya eqembu lase-England, iNewcastle United. Le ndoda, eyayeka isibhakela ingakaze yehlulwe, ibiphawula ohlelweni i-Evening with Floyd Mayweather obeluvakas­hele eNewcastle.
UMayweathe­r uthe ngeke ananaze uma abantu baseNewcas­tle bemnxenxa ukuthi ayifake imali yakhe kule kilabhu. Umnikazi weNewcastl­e, uMike Ashley, usanda kulifaka endalini kanti uke waba nezingxoxo neziqumama zaseSaudi Arabia.
Isithombe: Bloomberg Floyd Mayweather